GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Bicol Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Guarani Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kikuyu Kinyarwanda Korean Lingala Lithuanian Luo Malagasy Myanmar Ngabere Norwegian Nzema Papiamento (Aruba) Persian Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Uruund Vietnamese Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zulu
Ò NWERE onye n’ime anyị nsogbu na-abịatụbereghị, ya achọọ onye ga-enyere ya aka? Ọ bụ ụdị nsogbu bịaara anyị ga-eme ka anyị mara onye anyị ga-agakwuru. Onye anyị ga-agakwuru nwere ike ịbụ enyi anyị nke ga-emetara anyị ebere, nke makwaara nsogbu ahụ anyị nwere. Ihe mere anyị ga-eji agakwuru ya bụ na anyị ma na o nwere ọmịiko nakwa na ọ ma nsogbu ahụ anyị na ya na-alụ.
Ụfọdụ ndị na-eme ụdị ihe a ma ha kpewa ekpere. Kama ikpegara Chineke bụ́ onye dị elu ekpere, ahụ́ na-aka eru ha ala ịrịọ ndị senti arịrịọ. Ha chere na ebe ọ bụ na ndị senti ebiela n’ụwa, nweekwa ụdị nsogbu ndị mmadụ na-enwe, ha ga-aka emetara ha ebere. Dị ka ihe atụ, ọ na-abụ ihe dị ezigbo mkpa funahụ ụfọdụ ndị, ha ekpegara onye a kpọrọ Senti Antoni onye Padua ekpere ka o nyere ha aka. A sịrị na ọ bụ ya na-ahụ maka ihe furu efu ma ọ bụ ihe e zuru ezu. Ọ bụrụ na ha chọrọ ikpe ekpere maka anụmanụ na-arịa ọrịa, ha nwere ike ikpegara ya senti a na-akpọ Senti Fransis onye Asisi. Ndị ike ụwa gwụrụ na-ekpegakwara onye a kpọrọ Senti Jud Tadiọs ekpere.
Ma, olee otú anyị ga-esi amata ma Akwụkwọ Nsọ ò kwuru na ọ dị mma ka anyị na-ekpegara ndị senti ekpere? Ebe ọ bụ Chineke ka anyị na-ekpegara ekpere, anyị kwesịrị ịchọpụta ma ọ̀ na-anụ ekpere anyị? Anyị kwesịkwara ịjụ, sị: Ekpere a na-ekpegara ndị senti ọ̀ na-adị Chineke mma, ka ọ̀ na-ewe ya iwe?
IHE BAỊBỤL KWURU BANYERE IKPEGARA NDỊ SENTI EKPERE
Ihe mere ndị mmadụ ji malite ikpegara ndị senti ekpere bụ maka na chọọchị Katọlik na-akụziri ndị mmadụ na ndị senti na-arịọchitere ụmụ mmadụ arịrịọ n’ihu Chineke. Akwụkwọ bụ́ New Catholic Encyclopedia kwuru na nke a pụtara “onye nọ ná mkpa isi n’aka onye ya na Chineke dị ná mma rịọta Chineke ihe dị ya mkpa.” N’ihi ya, onye na-ekpegara ndị senti ekpere bu n’obi na ya ga-esi n’aka ha nweta ihe ọma n’ihi na o chere na ndị senti na Chineke dị n’ezigbo mma.
Ihe a ha na-eme ò si na Baịbụl? Ụfọdụ ndị na-ekwu na ọ bụ ihe Pọl kwuru n’akwụkwọ ozi o dere mere ndị mmadụ ji ekpegara ndị senti ekpere. Dị ka ihe atụ, Pọl gwara Ndị Kraịst nọ na Rom, sị: “Eji m aha Onyenwe anyị Jizọs Kraịst nakwa ịhụnanya nke sitere na mmụọ nsọ na-agba unu ume, ụmụnna m, ka unu soro m na-ekpekusi Chineke ekpere ike n’ihi m.” (Ndị Rom 15:30) Ihe Pọl na-ekwu ọ̀ bụ ka Ndị Kraịst ibe ya na-arịọchitere ya arịrịọ n’ihu Chineke? Mbanụ. Ọ bụrụ na e nwere onye ga-arịọchitere ibe ya arịrịọ, ọ bụ Pọl kwesịrị ịrịọchitere ha n’ihi na ọ bụ onyeozi Kraịst. N’ihi ya, ihe Pọl na-ekwu bụ na Onye Kraịst nwere ike ịgwa Onye Kraịst ibe ya ka o kpeere ya ekpere. Ma, mmadụ ikpegara onye e chere na ọ nọ n’eluigwe ekpere ka ọ rịọchitere ya Chineke arịrịọ dị iche n’ihe ahụ Pọl kwuru. Gịnị mere anyị ji kwuo otú ahụ?
N’oziọma Jọn, Jizọs kwuru, sị: “Ọ bụ m bụ ụzọ na eziokwu na ndụ. Ọ dịghị onye na-abịakwute Nna m ma ọ́ bụghị site na mụ.” (Jọn 14:6) Jizọs kwukwara, sị: “Nke a ga-eme ka Nna m nye ụnụ ihe ọbụla ụnụ rịọrọ ya n’aha m.” (Jọn 15:16, Baịbụl Nsọ: Nhazi Katọlik) Jizọs ekwughị ka anyị na-ekpegara yanwa ekpere, ya bụ, anyị kpegara ya ekpere, ya arịọziere anyị Chineke arịrịọ. Kama, o kwuru na ọ bụrụ na anyị chọrọ ka Chineke nụ ekpere anyị, anyị ga-ekpegara Chineke ekpere naanị n’aha yanwa bụ́ Jizọs.
Mgbe ndị na-eso ụzọ Jizọs gwara ya ka ọ kụziere ha otú e si ekpe ekpere, ọ sịrị ha: “Mgbe ọ bụla unu na-ekpe ekpere, sịnụ, ‘Nna, ka e doo aha gị nsọ. Ka alaeze gị bịa.’” (Luk 11:2) Ị̀ hụrụ na ihe Jizọs kwuru bụ na “mgbe ọ bụla,” ma ọ bụ oge ọ bụla, anyị na-ekpe ekpere, ọ bụ naanị Chineke ka anyị ga-ekpegara ya, ọ bụghị Jizọs ma ọ bụkwanụ onye ọ bụla ọzọ? Ebe ọ bụ na Jizọs tara ụkwa jaa ezé ebe a, ọ̀ bụ na o doghị anya na ọ bụ naanị Chineke ka anyị kwesịrị ikpegara ekpere n’aha Jizọs Kraịst kama isi n’aka ndị senti ma ọ bụ n’aka onye ọzọ rịọ Chineke arịrịọ?
Ikpe ekpere bụ otu ụzọ dị mkpa anyị si efe Chineke. N’ihi ya, onye kpegaara onye ọzọ ekpere na-efe onye ahụ ofufe, onye mekwara otú ahụ na-enupụrụ Chineke isi. (Jọn 4:23, 24; Mkpughe 19:9, 10) Ọ bụ ya mere o ji bụrụ naanị Chineke ka anyị kwesịrị ikpegara ekpere.
ỤJỌ Ò KWESỊRỊ ỊTỤ GỊ ỊGWA CHINEKE OKWU?
N’oge Jizọs nọ n’elu ugwu kụziere ndị mmadụ ihe, o mere otu ihe atụ. N’ihe atụ ahụ, o kwuru banyere nwatakịrị nke rịọrọ nna ya achịcha ma ọ bụ azụ̀. Nna ya ọ̀ ga-ahapụ inye ya achịcha ma nye ya nkume, ma ọ bụkwanụ hapụ inye ya azụ̀ ma nye ya agwọ? (Matiu 7:9, 10) O nweghị nna hụrụ nwa ya n’anya ga-eme otú ahụ.
Chineke chọrọ ka anyị na-agwa ya ihe dị anyị n’obi otú nna nke hụrụ nwa ya n’anya na-achọ ka nwa ya na-agwa ya ihe dị ya n’obi
Ka anyị mee ihe atụ ọzọ yiri nke ahụ. Were ya na ị bụ nna ma ọ bụ nne, ya abụrụ na o nwere ihe dị mkpa nwa gị chọrọ ịrịọ gị. Gị na nwa gị ahụ dịkwanụ n’ezigbo mma, ị na-egekwa ya ntị mgbe ọ bụla ọ chọrọ ịgwa gị okwu. N’agbanyeghị otú a gị na ya si dị ná mma, ọ bịara na-atụ egwu ịgwa gị okwu, ya agwa onye ọzọ ka ọ bịa rịọ gị ihe ọ chọrọ. Olee otú obi ga-adị gị? Ọ bụrụkwanụ na mgbe ọ bụla ọ chọrọ ịgwa gị okwu, ya agwa onye ọzọ ka o kwuchite ọnụ ya, o yikwanụghị ka ò nwere mgbe ọ ga-akwụsị ime otú ahụ, obi ọ̀ ga-adị gị mma? O doro anya na ọ gaghị adị gị mma. Ndị nne na nna hụrụ ụmụ ha n’anya na-achọ ka ụmụ ha na-abịakwute ha, ha na-achọkwa ka obi ruo ụmụ ha ala mgbe ha na-arịọ ha ihe ọ bụla ha chọrọ ka ha meere ha.
Mgbe Jizọs na-akọwa ihe mere o ji mee ihe atụ ahụ, ọ gwara ndị na-ege ya ntị, sị: “Ya mere, ọ bụrụ na unu maara otú e si enye ụmụ unu ezi onyinye, ọ bụ ezie na unu bụ ndị ajọ omume, lee ka Nna unu nke nọ n’eluigwe ga-esi nye ndị na-arịọ ya ihe ọma karị!” (Matiu 7:11) O doro anya na ọ na-agụsi nne ma ọ bụ nna agụụ ike imere nwa ya ihe ọma. Otú ahụkwa ka ọ dị Nna anyị nke eluigwe, ọ na-akadị agụsi ya agụụ ike imere anyị ihe anyị na-arịọ ya.
Chineke chọrọ ka anyị na-ekpegara ya ekpere n’onwe anyị, ọ bụrụgodị na mmehie anyị mere na-enye anyị nsogbu n’obi. O nweghị onye ọ bụla o nyefere ọrụ ịnụ ekpere anyị. Ọ bụ ya mere Baịbụl ji sị: “Tụkwasị Jehova ibu arọ gị, ya onwe ya ga-akwadokwa gị.” (Abụ Ọma 55:22) Kama ịtụwa anya ka ndị senti ma ọ bụ onye ọ bụla ọzọ na-arịọchitere anyị arịrịọ, anyị kwesịrị iwere Jehova Chineke ka ezigbo enyi anyị nke anyị nwere ike ịgakwuru mgbe ọ bụla.
Nna anyị nke eluigwe hụrụ onye ọ bụla n’ime anyị n’anya. Ọ chọrọ inyere anyị aka mgbe ọ bụla anyị nọ ná nsogbu. Ọ gwakwara anyị ka anyị bịa ya nso. (Jems 4:8) Obi dị anyị ụtọ na Chineke chọrọ ka anyị na-ekpegara ya ekpere n’ihi na ọ bụ Nna anyị, bụrụkwa “Onye na-anụ ekpere.”—Abụ Ọma 65:2.